Inqubo yokusetha i-akhawunti yasebhange ye-Offshore
Isethaphu ye-Akhawunti ye-offshore - Okumele ukwenze
Isinyathelo sokuqala sokusetha sakho akhawunti yasebhange ye-offshore ukuxoxa ngezidingo zakho nochwepheshe onolwazi. Ungakwenza lokhu ngocingo noma online. Ngokukhethekile, ungasebenzisa inombolo noma ifomu kuleli khasi ukuxhumana ngqo nomxhumanisi.
Ngakho-ke, singakwazi ukufaka imininingwane oyidingayo ukunikeza ukusetha i-akhawunti yasebhange ezindaweni ezithandwayo. Ithimba lethu lochwepheshe linganikeza ukwesekwa ngokuvula i-akhawunti entsha yasebhange cishe kunoma yiliphi izwe.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi amabhange amaningi aphesheya kwezilwandle azodinga isingeniso esifanele. Lowo ngumuntu osuvele unobudlelwano nebhange. Ngenhlanhla, le nhlangano ingumethuli ofanelekile wezikhungo eziningi zezezimali emhlabeni wonke.
I-akhawunti yasebhange lakwelinye izwe ibhekisa kwi-akhawunti yasebhange embonini lapho osayina noma ozuza i-akhawunti engeyona isakhamuzi noma ohlala khona. Sivame ukubiza le mithetho njengendawo yasebhange ngenxa yokuphoqelelwa kwabo ngokuqinile kobumfihlo kwamakhasimende. Lapho uvula i-akhawunti yasebhange engaphesheya kolunye lwalezi zindawo ezinhle zangaphandle, uthola ukubaluleka kokugcinwa kwezimfihlo kwezimali.
Ngakho-ke, ukwandisa kanjani ubumfihlo? Ngamafuphi, abathengi bethu bavame ukuvula ama-akhawunti abo egameni lezinkampani ezizimele ezingasolwandle esizisungula. Izizathu zokuqala zokuvula ama-akhawunti ebhange lakwamanye amazwe ziyimfihlo nokuvikelwa kwempahla. Kunezinzuzo ezingezekile njengokuhlela kwezakhiwo kanye nokutshalwa kwezimali namazwe aphesheya. Lezi zinzuzo zivame ukudinga ithuluzi elifanele lezomthetho elifanele njenge-offshore LLC. Okuthandwa kakhulu futhi kunenzuzo kulabo abafuna ubumfihlo nokuvikelwa kwempahla Nevis LLC.
Indlela Yokuvula I-akhawunti Yebhange Langaphandle
Amabhange aphesheya anezidingo ezifanayo uma evula ama-akhawunti. Amabhange enza lokho ukuze ahambisane namazinga aphesheya. Lokhu kufaka imininingwane emayelana nawe, ukukhonjwa kanye nediphozi yokuqala. Ngokuya ngesikhungo sakho sezezimali, ibhange lingakucela amakhophi wepasipoti yakho, izinkomba kanye nobufakazi bendawo ohlala kuyo. Siyakwazi ukuvula iminyango emabhange aphesheya aqine kakhulu emhlabeni. Ngenxa yolwazi olukhulu nokuphila isikhathi eside enkundleni, singabethuli abafanelekayo emabhange amaningi amakhulu naseSwitzerland anamandla.
Okokuqala, wenza inkampani yakwamanye amazwe. Ngemuva kwalokho, uvula i-akhawunti yasebhange egameni lebhizinisi. Lokhu kuvula i-akhawunti yakho yasebhange engaphesheya ngegama lenkampani yangasese engaphesheya kwegama kunegama lakho. Lapho unempahla ngegama lakho ngokuqondile, ziqondiswa lula kakhulu ngamacala.
Ngaphezu kwalokho, ungathola ubumfihlo obukhuphukile bezimali uma usebenzisa amandla amabili aphesheya. Uba yinkampani yakho ezweni elilodwa. Ngemuva kwalokho uvula i-akhawunti yakho yasebhange kwenye. Empeleni, usebenzisa ngokunenzuzo imithetho emibili yobumfihlo yezwe langaphandle. Ezandleni ezivumelekile zasebhange elingaphesheya, kuyicala elikhulu ukuhlinzeka ngolwazi lwe-akhawunti yamakhasimende kwabanye. Kwamanye amagunya futhi kuyicala ukuthi umuntu ahlinzeke ngolwazi ngobunikazi benkampani yakho. Inhlanganisela ye-akhawunti yasebhange nenkampani ingenye yezindlela ezisheshayo zokuvikela umcebo wakho emehlweni enyama. Ngeminye imininingwane, funda, Umhlahlandlela Wokuqala Wasebhange Lwama-Offshore, lapho uzobona khona imininingwane eyisisekelo ebhenki lolwandle.
I-Offshore Banking Duegence
I-Financial Services Commission (FSC) noma inhlangano efanayo kulelozwe noma isifunda ilawula ibhange ngalinye. Emhlabeni jikelele, i-Organisation for Cooperation and Development (OECD), i-European Union, kanye nezinye izinhlangano ibeka izincomo nezidingo. Zisendaweni yama-FSC ahlukahlukene okufanele ayisebenzise kanye namabhange okufanele awalandele.
Isizathu esikhulu sale mitheshwana ukugcina umthetho ogcina izakhamizi ezigcina umthetho ngaphakathi kanye nezigebengu ngaphandle kohlelo lwezezimali. Kungakho kunezidingo eziqinile zokusiza ukunqatshelwa kwemali noma eminye imisebenzi engekho emthethweni.
Nazi izinto ezivamile ngokuvamile ezidingekayo lapho ucubungula amabhange ase-offshore. Ibhange libiza lolu lwazi ngokuthi "ukukhuthala" noma ukuhlangana nezidingo ze "Yazi ikhasimende lakho" noma i-KYC.
Nasi isibonelo sezinto ezithile ezidingeka umthetho.
I-1. Isicelo se-akhawunti yasebhange.
I-2. Ikhadi lesignesha
I-3. Ikhophi engaziwayo yepasipoti
I-4. Ubufakazi bekheli, njenge-bill utility
I-5. I-Reference Reference yaseBhange esuka ebhange lapho umuntu ofanele abe nobuhlobo bebhange naye okungenani iminyaka emibili
I-6. I-Professional Reference Letter evela ku-Akhawunti / Ummeli onomuntu ofanelekile oye waba nobuhlobo obuhle naye okungenani iminyaka emibili
Lokhu akulona uhla oluphelele. I-FSC ne-OECD kanye nebhange, uqobo, lingaba nezidingo ezingezekile. Futhi, konke lokhu kuhloselwe ukugcina ubuqotho kanye nokuba semthethweni kohlelo lwamabhange nokusiza ukuvimbela ubugebengu. Iziphathimandla zebhange zizowabheka kahle amaphepha bese zishayela izingcingo ukwenza ukuthi unikeze izinkomba ezisebenzayo.
Isibonelo, bazofuna ukuqinisekisa indawo yokuhlala yakho yokuhlala. Ngakho-ke, udinga uhlobo oluthile lobufakazi, njengebhili yokusebenzisa egameni lakho. Ngokuya ngohlobo lwanoma yimuphi umqulu, i-notarization ingabonakala idingeka. Amanye amazwe angadinga nezindlela eziningi zobunikazi ngaphambi kokuvula i-akhawunti.
Lapho uvula i-akhawunti yasebhange engaphesheya, ungaqasha uchwepheshe ozokusiza wenze njalo. Inhlangano yethu, ngokwesibonelo, ihlinzeka ngale sevisi. Ngaphandle kwalokho, uzodinga ukucwaninga ngezidingo ezithile igunya ngalinye noma igunya lasebhange. I-Quora ilinganisela mayelana 14,600 ibhange emhlabeni. Ngakho-ke, ngaphandle kokuthi unesikhathi esiningi ezandleni zakho, iningi lingavuma ukuthi kungcono ukuthola usizo olunolwazi.
Izinkomba kanye neMibhalo
Ngokuqondene nezinkomba zebhange, ibhange elingaphesheya lingadinga ubufakazi bobuhlobo obanelisayo phakathi kwakho nebhange lakho. Kungafuna imininingwane efana namabhalansi nsuku zonke. Ezimweni eziningi, izinyanga eziyisithupha kuya kwesitatimende sasebhange sonyaka kufanelekile. Ibhange lakho lasekhaya nalo lingakunikeza incwadi yesethenjwa eqinisekisa ukuthi uyiklayenti endaweni enhle.
Ibhange elingasogwini lingase futhi lifune imininingwane ngohlobo nohlobo lokukhokhela ohlela ukuluqhuba. Amabhange abengaphansi kwengcindezi eyandayo yokuvimba ukuphathwa kwemali neminye imisebenzi engekho emthethweni. Ngakho-ke, la madokhumenti angeziwe ayacelwa ukuze isikhungo sikwazi ukubona imithombo yokuthola imali ku-akhawunti. Uma kungenjalo, bangathola inhlawulo noma balahlekelwe ilayisense labo lasebhange. Ngakho-ke, ungalindeli ukuthi bakwenzele okuhlukile.
Ingabe isiNgisi ulimi olusemthethweni ezweni ohlela ukuvula i-akhawunti yakho yasebhange ye-offshore? Uma kungenjalo, kungadingeka unikeze ukuhunyushwa okuqinisekisiwe kwamadokhumenti akho ngolimi olusemthethweni.
Njengoba ukwazi ukubona, inqubo yokusetha ama-akhawunti asebhange lolwandle ihlukile kunokuvulwa kwe-akhawunti yasekhaya. Amabhange amaningi adinga ukuthi ubonakale mathupha. Ngenhlanhla, siyazazi ezingazi. Labo abangadingi ukuhamba, bazodinga imibhalo eyengeziwe ukufakazela ukuthi ungubani. Lokhu kuzosizakala. Lokho kungenxa yokuthi uma ukhombisa ubuza imali yakho, uyazi ukuthi izokuyela kuwe kuphela; hhayi umuntu othi unguwe. Ngakho-ke, ngokunikeza i-ID efanelekile ngaphambili, wena nebhange lizokwazi ukuthi nguwena uqobo.
Njengoba izinqubo zihluka ngebhange nezwe, kubalulekile ukucacisa izinkinga ezithile ngaphambi kokuvula i-akhawunti. Uzofuna ukwazi ukuthi kunemiphi imikhawulo ekudluliseni inani elikhulu lemali. Ngakho-ke, uzofuna ukuqaphela izindlela zokugunyazwa okunjalo. Uzophinde ufune ukuthola ukuthi ikhadi lebitayibhange lizosebenza emhlabeni wonke. Ingabe isebenza kokubili ukuthenga okuthengiswayo naku-ATM? Thola ukuthi ungasebenzisa yini ikhadi lokukhishwa imali ukuze ukhokhe izimpahla namasevisi e-intanethi.
Inani lenzalo amabhange amaningi aphesheya awanikelayo kwesinye isikhathi liphakeme kunalelo elinikezwa ngamabhange ase-US. Izakhiwo zezimali nazo zingaphakama kancane. Ingxenye yokwenza inkuthalo efanelekile icubungula yonke imali ekhokhiswa yibhange. Uma ungahleleli ukwenza ukudluliselwa okuningi, imali engeke yenze umehluko omkhulu; kodwa bangangeza nge-akhawunti yasebhange esebenza kakhulu.
Uma i-Akhawunti Yakho ivuliwe
Uma isikhungo sesilungisile akhawunti yasebhange ye-offshore imibhalo yokusetha, ngokujwayelekile bathumela kuwe isiqinisekiso nge-imeyili. Ngaleso sikhathi ibhange lizolinda ukudluliswa kocingo. Uma sebethole idiphozi yokuqala bazosebenza i-akhawunti yakho entsha. Ezinye izindleko zifaka imali yokuvula, amakhadi asebhange angeziwe (uma ekhona), izithunywa nezinye izindleko. Futhi, lokhu kuzohluka phakathi kwabahlinzeki be-akhawunti yasebhange lolwandle.
Lapho i-akhawunti yasebhange isebenza, uvame ukuthola ukufinyelela ku-inthanethi ukudala i-akhawunti yakho yomsebenzisi nephasiwedi. Ungase futhi uthole izinto ezinjengedivayisi yesiginesha esebenziseka kalula. Lapho uyithola, ungahle ubone idivaysi yedijithali ekhiqiza ikhodi evikelekile yokufinyelela kubhalansi ye-akhawunti yakho. Ngamabhange amaningi, uzokwazi ukwenza ukuthengiselana ngokushesha, kalula, ngasese nangokuphephile. Ngakho-ke, ukusebenzisa i-akhawunti yakho nokusebenzisa ukungena ku-inthanethi kuyenza ifane kakhulu nebhange elisezansi komgwaqo.
I-OnssCCanyany isize izinkulungwane zabantu emhlabeni wonke ukusetha ama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle. Ngaphezu kwalokho, sisiza ekusunguleni ama-akhawunti wabazimele besitoko sangasese. Ngaphezu kwalokho, le nhlangano ingenye yezinkampani eziholayo ezihlinzeka ngezinhlelo zokuvikela impahla. Ngakho-ke, singumhlinzeki othembekile onobudlelwano namandla olwandle aphesheya kwezilwandle. Uma kwenzeka ufisa ukubamba iqhaza ebhange elingaphesheya kwezilwandle, qiniseka ukuthi uzazise ukuze uthathe isinqumo esifanele. Yilokho esingakusiza ukukwenza.
Izinzuzo ze-akhawunti yaseBhange langaphandle
Amabhange aphesheya anikela ngamanani wenzalo engcono ukuthi amabhange ase-US nawaseCanada. Futhi abaningi banikezela ngezinsizakalo ze-akhawunti ephethwe yokutshalwa kwezimali. Ukungeza ubumfihlo kunenzuzo eyodwa kubanki yasolwandle. Elinye ithuba lokutshala imali okuhle kwamanye amazwe. Ukungeza i-akhawunti yasebhange langaphandle kanye nethuluzi lokuvikelwa kwempahla kuyindlela enhle yokuzivikela ngokwezezimali. Uma ngabe une-akhawunti yaphesheya kwezilwandle ngegama lakho siqu, awuvikelekile. Lokho wukuthi, ijaji lendawo lingakuyala ukuthi udlulise imali. Ukubamba i-akhawunti yakho ku-offshore LLC noma ukuvikelwa kwempahla, kuvula amatafula. Ukwenza lokhu kungavimba ummeli womphikisi wakho ekuphangeni i-akhawunti yakho.
I-Overseas Banking, i-Line Line
I-Akhawunti yeBhange i-Overseas imane isho nje, ukubhenka nesikhungo sezezimali esizinze ezweni elingelilo elakho. Ukubhanga ngaphesheya kwabaseMelika ngokuvamile kusho indawo ephephile nethandwayo yezimali. Lezi zindawo zihlanganisa iSwitzerland, iziqhingi zaseCayman, iBelize kanye neLuxembourg. Ngenxa yalokho.
Njengoba sesishilo, ukusebenzisa i-akhawunti yasebhange phesheya kwezilwandle kuyafana nokusebenzisa i-akhawunti yakho yasekhaya. Okusho ukuthi, amabhange aphesheya atholakala kalula ngemishini ye-ATM nokuphathwa kwe-akhawunti online.
Ama-Akhawunti Ebhange Lakwamanye Amazwe anezikhungo zezimali eziphephe futhi eziqinile emhlabeni. Sebenzisa enye yezinombolo zocingo noma ugcwalise ifomu lokubonisana kuleli khasi ukuthola eminye imininingwane.
Izinzuzo ze-Banking Overseas
Izithakazelo ezingcono kakhulu
Ukuthuthukiswa kwe-Asset Protection kusuka kuma-Lawsuits
Ivula i-Door ku-Investment Offshore Investment ekhangayo
Nayi ithiphu eyodwa enkulu ezokusiza ukukhulisa ubumfihlo bezezimali nokuvikelwa kwempahla. Leyo, vula i-akhawunti yasebhange yezilwandle egameni lenkampani yasolwandle. Lokhu kuhlinzeka ngokuyimfihlo ngokwezimali okuthuthukisiwe. Kunezindlela eziningi zokukhulisa ubumfihlo bakho nokuvikela amafa akho. Mane uhlanganise ama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle, izinkampani nama-trust. Isibonelo, izimiso zeNevis LLC zinikeza ukuvikela kwempahla okunamandla kwanoma iyiphi i-LLC ngombono wethu. Ngaphezu kwalokho, umthetho wamacala ukhombisa i-Cook Islands Trust njengethuluzi elisebenzayo lokuvikela impahla ye-offshore yanoma yiluphi uhlobo.
Njengoba wazi, ukuvikela ingcebo yakho nobumfihlo bakho bezezimali akukaze kubaluleke kakhulu. Ngenhlanhla, ungathokozela ubumfihlo bezimoto ezivikelekile nezokuvikela impahla ezindaweni eziphephe ezingaphesheya kwezilwandle. Abahlinzeki abanjengathi bakha izinkulungwane zezinkampani ezingasogwini futhi bethemba amaklayenti abo nsuku zonke. Abanini bazo abasha, bafaka izigidi zamadola kuma-akhawunti asebhange aphesheya minyaka yonke. Njengokwethulwa okufanelekile emabhange aqine kakhulu eSwitzerland, le nhlangano isize izinkulungwane zabanye ngamabhange aphesheya kwezilwandle. Okusho ukuthi, le nhlangano ibasiza ukuthi bavule ama-akhawunti asebhange aphesheya. Njengoba unjalo, ungawavula ngediphozithi yokuqala ephansi lapho uchwepheshe onolwazi ehola indlela.
The I-IRS intela abantu baseMelika emholweni womhlaba wonke. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi ufuna ukuholwa yi-CPA engakunika izeluleko zentela ezinengqondo. Ngabe ufuna indlela engokomthetho yokuvikela izimpahla? Ngabe usebenza ngendlela yokuziphatha efanele futhi ehambisana nomthetho? Uma kunjalo, zizwe ukhululekile ukusebenzisa inombolo noma ifomu elinikezwe kuleli khasi.
Imigomo Yomthetho kuphela
Lokhu okungenhla kushiwo ngokuqonda ukuthi inkampani ne-akhawunti yasebhange kusetshenziselwa izinhloso zomthetho kuphela. Ngokuvamile, abantu base-US bakhokhiswa intela yemali engenayo emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, ukuvikelwa kwempahla kusuka ku-frivolous, ukukhathazeka imidwayimane iyamukeleka ezimweni eziningi. Kodwa-ke, ukweqa kwentela noma ukusebenzisa okungenhla ukuvikela imali etholwe ngokungemthetho akuyona inhloso yalesi sihloko. Ngakho-ke, sicabanga ukuthi uyisakhamuzi esithobela umthetho futhi esinenhloso yokuziphatha okuhle. Uma kunjalo, ukusebenzisa izinsizakalo ezingenhla kunganikeza ubumfihlo bezimali nokuvikelwa kwempahla okufunayo.